Ciidamada katirsan Dowlada oo holwagal kafuliyey deegaanka Camaara ee gobolka Mudug. – Radio Baidoa
Ciidamada katirsan Dowlada oo holwagal kafuliyey deegaanka Camaara ee gobolka Mudug.
Ciidamo ka Tirsan Xoogga Dalka Qaybta 21-aad oo ay Hogaaminayaan Taliyaha Qaybta Gen: C/Casiis C/Laahi “Qooje” iyo Saraakiil kale ayaa Howlgal Qorsheysan Ku Gaaray degaanka Camaara ee Gobolka Mudug Halkaa oo ka Mid ah Goobaha ay sida Cabsida ah Ku Joogeen Al-Shabaab.
Socdaalkan oo qayb ka ahaa qorshaha amni xaqiijinta ayay saraakiishu Kula kulmeen Shacabka deegaanka gaar ahaan waxgaradka kuwaa oo si sare ugu riyaaqay tilaabadan ciidamada dowladu Ku gaareen camaara maadaama deegaankaasi aysan horay ugu sugneyn Ciidamada Dowladda .
Taliyaha Qaybta 21-aad Gen: “Qooje” oo la hadley Shacabka Camaara ayaa u sheegey in Ciidamadu ay horay usii socon doonaan qorshuhuna Yahay in la gaaro dhamaanba Deeganada kale ee aan xorta aheyn , dadwaynaha ayuu taliyuhu ugu baaqay in ay ciidamada Ku garab siiyaan howshan .
Gaadiidka Dagaalka ee Xoogga Dalka ayaa si Rasmi ah ugu Sugan Wadooyinka Camaara, waxaana ay sheegeen in ay kusii jeeddaan degmada Xaradheere oo Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin.
madaxweynaha Turkiga oo caafimaad urajeeyey Boris Johnson.
Isbaitaalka Digfeer ee magaalada muqdisho oo maanta xiran.